Chisungo chekubhadhara kukanganisa kune vasina mhosva vePalestine - Rabbi Michael Avraham
Chisungo chekubhadhara muripo wekukuvadza kune vasina mhosva vePalestine
Responsa > Category: General > Chisungo chekubhadhara muripo wekukuvadza kune vasina mhosva vePalestine
Pine Yakabvunzwa 5 months ago
Pane basa here kuHurumende yeIsrael yekuripa vanhu vasina mhosva vekuPalestine vakakuvadzwa nezvakaitwa neHurumende yeIsrael vachipokana neHamas?
Uye mumwe mubvunzo, kana iwe ukawa Kukanganisa Mukuita kwerimwe simba, uye somugumisiro wechikanganiso muPalestine akakuvadzwa, pane musengwa wokumutsiva here?
mikyab Vashandi Yakapindurwa 5 months ago
Muchinyorwa changu pamusoro pekunetseka kwemadziro ekudzivirira (munhu uye vanhu vose), mhedziso ndeyokuti kana ari wechitatu (asiri wePalestine) akakuvadzwa nezviito zvedu, ndingati hongu, uye ipapo Hamas inogona kupomerwa mhosva. kukanganisa. Asi panyaya yevaPalestine, ndinoona sekuti vanofanira kutendeukira kuHamas, iyo iri kuvarwira uye basa ravo richavatsiva. Sezvo pasina chikonzero chekuripa vanhu vatiri kurwa navo varwi vakakuvadzwa muhondo zvisina basa. Zvinonzi kana kuine hondo machipisi anopfachuka.
Pine Akapindura 5 months ago
Ndinorangarira asi iwe wakanyorawo ipapo kuti kana anotambudzwa achigona kuponesa mutambudzi mune imwe yenhengo dzake uye akasaponesa saka anofanira. Sei zvisina kushanda pano zvakare maererano nekukanganisa?
mikyab Vashandi	Akapindura 5 months ago
Kutanga, ndiani akati akanga ari mamiriro ezvinhu aangadai akaponesa? Kune vapoteri vasina kusimba vasingadzivisiki. Chechipiri, kunyangwe paine nzira yekudzivisa mune iyi chaiyo nyaya kukanganisa kunoitika uye iri chikamu chenzira yenyika muhondo.
Mutoo waMaimonides ndewokuti kuuraya kwakadaro hakusungirwi. Zvinorambidzwa asi haasi mhondi. Iyo nzira yeThos ndiyo hongu.
Hasbra anoti kana ndakuvadza zvinhu zvemuridzi netsaona handifanire kumuripa. Uye vamwe vekutanga nevekupedzisira vakanyora kuti mukutambudzwa pachake hakunawo kurambidzwa kuuraya kunyange kana achigona kumuponesa mune imwe yemakumbo ake. Izvi zvinongotaurwa nezvemunhu wechitatu.
Kana chimwe chiitiko chakaitika apo mumwe wevatumwa veNyika yeIsrael (musoja / mupurisa) akatsauka uye akaita chiito chakashata kune mugari wePalestine (ngatiti murwi akabata chibharo muPalestine). Mumamiriro ezvinhu akadaro, pane musengwa weHurumende yeIsrael here wekuripa munhu mumwe chete akapara mhosva?
Ndofunga kudaro. Pane mukana wekumhan’arira musoja achadzorera mari kuhurumende. Asi akaita maererano nesimba nesimba (chiremera nezvombo) zvaakamupa, saka ane mhosva yezviito zvake.
Kana akabatwa chibharo pasina, kwete nesimba rezvombo kana chiremera chaakagamuchira asi semumwe murume chero upi zvake, ipapo mukuona kwangu chirevo chacho ndechemunhu pachake uye hapana chinosungirwa kuhurumende kubhadhara.
Kana riri iro basa renyika, rinofamba sei nezvawanyora pamusoro apa kuti nyika haina mhosva yekukanganisa kwayo, nepo pano ndiyo ine mhosva yehuipi hwevamiriri vayo (iyo semaonero ehurumende haisi mhosva. zvinoonekwa sezvakaipa).
Nekuti pane kutaurwa kwekukuvadzwa kwakakonzerwa muhondo, uye nekuda kweizvozvo hapana mutoro nekuti kune mubatanidzwa mutemo wekutambudza. Asi kungoita zvechimbichimbi kusiri kwechinangwa chehondo zvechokwadi kune basa rekuripa. Hapana mutemo wekutambudza pano.
Imwe nyaya yakadai inoziikanwa kuti mugore ra2000 Mustafa Dirani akamhan’arira Nyika yeIsrael achida mari yemendenenzi achiti akabatwa nemhosva mbiri dzekushungurudzwa pabonde nevaimubvunzurudza. Pakati pezvimwe zvinhu, magwaro emhosva anoti mukuru wepaUnit 504, uyo anozivikanwa nezita rekuti “Captain George,” akaisa izvi mugotsi raDirani. Sekutaura kwaDirani, panguva yaaibvunzurudzwa aitambudzwa, kubvunzurudzwa, kunyadziswa, kurohwa, kushaiswa hope, uye kusungwa akapfugama kwemaawa akawanda, uye nekuda kwekunyadziswa kwake aibvunzurudzwa ari musvo . Matepi ekuferefeta, akatorwa neUnit 504, akaratidzwa pachirongwa cheterevhizheni "Chokwadi" muna Zvita 15, 2011.  Mune rimwe remavhidhiyo, muongorori George anoonekwa achidaidza mumwe wevaferefeta achimuraira kuti akwidze bhurugwa rake kuna Dirani uye kutyisidzira Dirani nebhinya kana akasapa ruzivo. 
Muna Chikunguru 2011, Dare Repamusorosoro rakatonga, mumaonero evazhinji, kuti Dirani aigona kuramba achitsvaga mhosva yaakamhan'arira Nyika yeIsrael, kunyangwe achigara munyika yemuvengi, uye akatodzokera kukuita basa rehutsinye kurwisa nyika. nyika  Nechikumbiro chehurumende, pakaitwa imwe dare, uye muna Ndira 2015 zvakanzi zvakanga zvarehwa naDirani zviraswe, zvichinzi mushure mekunge Dirani abuda muhusungwa akadzokera kusangano remagandanga raiva nechinangwa chekutorera nyika matanho. uye kunyange kuriparadza.
Zvinoonekwa kubva pane izvi kuti pane zvakakosha kumubvunzo wekuti mumhan'ari anogara munyika yemuvengi here kana kuti kwete. Ini ndinorangarira zvakare kuti pane mutemo kubva kumazuva emutemo weBritish uyo unoti muvengi haakwanise kumhan'ara.
Mhinduro dzangu hadzisi pamutemo (ini handisi nyanzvi mumutemo wepasi rose). Ndakataura maonero angu pamusoro pehunhu.
Kana ari Dirani dambudziko rakanga risiri rekuti aigara munyika yemhandu asi kuti aiva mhandu ine simba. Chero ani anogara munyika yemuvengi anogona zvechokwadi kutora muripo, asi chete kana chimwe chinhu chakaitwa kwaari zvisiri pamutemo uye kwete mumamiriro ehondo (kureva kuti zvinokuvadza vanhu vasina mhosva). Ndinofungidzira kuti mashura aya haana kuitirwa kumushungurudza chete asi kutsvaga ruzivo kubva kwaari. Naizvozvo izvi zviito zvehondo. Dai vainge vachangobva kumushungurudza, kunyangwe paive paGSS nzvimbo sechikamu chekuferefeta, saka kunyangwe semuvengi aigona kukumbira muripo, uye ndiyo yaive nhaurirano yakaitika ipapo.
Nenzira, nharo yokuti kana akaita kuti aparadze nyika inomunyima kodzero yekushandisa masangano ayo inonzwika kwandiri inopokana zviri pamutemo. Muvengi wese (akatapwa) musoja ari mumamiriro ezvinhu akadaro, uye ndinofungidzira kuti hapana angataura izvozvo nezvemusoja. Vakataura izvi pana Dirani nekuti igandanga.
Uyezve, pane kukakavara pano: kana kushungurudzwa kwacho kwaipfuura zvaitenderwa kana kuti kwakaitwa nechinangwa chega chekushungurudza, saka kunyange kana Dirani asina kodzero yekumhan'arira hurumende inofanira kuongorora uye kuranga avo vakaita kudaro (chirango chemhosva, zvisinei nekuti Dirani ari kupomerwa mhosva yerudzi urwu). Uye kana vasina kutsauka - zvino zvine basa rei kuti ave muvengi. Hapana chikonzero chekuita.
Muripe magandanga Akapindura 5 months ago
B.S.D. XNUMX murudzi rweP.B
Zvinoita sekuti masangano emagandanga ane zviito zvehumhondi izvo IDF inoda kutora matanho ekudzivirira uye ekudzivirira ndiwo ane chikwereti chekukuvadza kwakakonzerwa panguva yehondo kune vanhu vasina mhosva, maJuda nemaArabu.
Makadii, Hasdai Bezarel Kirshan-Kwas Cherries
mikyab On Mhinduro kusarudzo yemahara
Yeshiva mudzidzi On Mhinduro kusarudzo yemahara
mikyab On Mhinduro kumibvunzo yaAmaretz
mikyab On Mhinduro kune bato reArab muhurumende
Yeshiva mudzidzi On Mhinduro kumibvunzo yaAmaretz